कहाँ पुग्यो पूर्वआइजीपी अर्यालको छानबिन ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
कहाँ पुग्यो पूर्वआइजीपी अर्यालको छानबिन ?
काठमाडौं । पूर्वआइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको अकूत सम्पत्तिको छानबिन गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न बिलम्ब गर्दैआएको छ । पूर्वआइजीपी अर्यालले आइजीपी हुँदा ५करोड भन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको छ । उनलाई अख्तियारले बयान लिएर १३ पन्ने सम्पत्ति विवरण पनि भराइसकेको छ । तर १३ पन्ने भराइसकेपछि मुद्दा दायर गर्ने अनुमान सबैले गरेका थिए । तर अख्तियार ब्याक भएको छ । र, उनको उजुरीको बारेमा सोमबार टुंगो लगाएर मुद्दा दायर गर्ने भने पनि अकस्मात रोकिएको छ ।
अर्यालले अख्तियार मिलाउन बीचौलिया र तस्कर गुहार्दैअआएका छन् । स्रोतका अनुसार पटक–पटक अख्तियारमा बयान दिइसकेका अर्यालले दिपक तिमिल्सिना नामका दलाल मार्फत् प्रमुख आयुक्त दिप बस्नेतलाई भेटेर जोगाइदिन आग्रह गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा सूचना प्रविधिका सामान्य कर्मचारी हुँदै ८ बर्षमै रहस्यमय ढंगले बीचौलियाको धन्दाबाट करोडौंपति भएका तिमिल्सिना पछिल्लो समय उपेन्द्रकान्त अर्यालका मीत उपेन्द्र महतोका निकट भएका छन् ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतका छोरा कमल बस्नेतसँग मिलेर धेरै ठूला उजुरीमा डिल गर्दै मिलाउँदैआएका तिम्सिनामार्फत् नै उपेन्द्रकान्त अर्यालले अकूत सम्पत्ति विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर हुनबाट रोक्न सफल हुँदैआएका छन् । तिम्सिना र उपेन्द्र महतोको गहिरो सम्बन्ध छ । उपेन्द्रकान्त अर्यालविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेरै छाड्ने तयारीमा रहेका प्रमुख आयुक्त बस्नेतले सोमबार उनीविरुद्धको उजुरीको बारेमा चासो नै नदिएको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार बस्नेतलाई तिम्सिनामार्फत् उपेन्द्रकान्त अर्यालले मिलाइसकेका छन् । संभवतः उनीविरुद्ध मुद्दा होइन, उनको उजुरी नै एक दुई दिनमा तामेलीमा राख्ने तयारीमा प्रमुख आयुक्त बस्नेत पुगेको स्रोतले बताएको छ ।
पूर्वआइजीपी अर्यालले नेपाल प्रहरीका डिआईजी पवन खरेल मार्फत् पनि अख्तियारका आयुक्त नवीन घिमिरेलाई केही दिनअघि मात्र भेटेको स्रोतले बतायो । घिमिरे खरेलका सम्धी हुन् ।
कुनै समय स्मार्ट टेलिकममा सेयर हत्याउन किर्ते काम गरेर बद्नामी कमाएका तिमिल्सिना एनआरएनका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र महतो निकट मानिन्छन् । महतोका मुद्दा मामिलाहरु यिनै तिमिल्सिनाले हेर्दै आइरहेका छन् । तिमिल्सिना पछिल्लो समय व्यापारी अजेयराज सुमार्गीविरुद्ध पनि हात धोएर लागिरहेका छन् । महतोले पनि आफ्ना मित अर्याललाई जोगाउन अख्तियारमा लविङ गरिरहेका छन् ।
मुद्दा मिलाएर अख्तियारकै आयुक्त बन्ने लक्ष्य बोकी हिंडेका अर्यालले बुझाएको सम्पत्ति विवरण चित्त बुझ्दो नदेखिएपछि अख्तियारले पटक–पटक बयान लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ । अर्यालमाथि हुण्डी कारोबारी पवन सरीयाको समूहसँग मिलेर अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप छ । सिन्धुलीको दुधौलीदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकमा आफन्तको नाममा भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको रकममार्फत अर्यालले सयौं रोपनी जग्गा खरिद गरेको अनुसन्धानका क्रममा खुलिसकेको छ । अर्यालले सम्पत्ति विवरणमा पुख्र्यौली घर सिराहाको आँप बिक्री गरी आर्जित सम्पत्ति भनेर उल्लेख गरे पनि त्यसमा कुनै मेल नखाएको खुलेको छ ।
अख्तियारका निलम्वित पूर्व प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको निर्देशनमा कार्कीका सम्धी रोहीणी थपलियालाई प्रहरीको सामान खरिदको टेण्डर दिंदा कमिसन खाएको विषयमा पनि अर्यालमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । त्यसैगरी प्रहरीको रासन खरिदमा पनि अर्याल मुछिएका छन् ।
को हुन् दीपक तिमल्सिना ?
दीपक तिमल्सिना सर्वोच्च अदालतमा सूचना प्रविधिमा काम गर्ने एक सामान्य कर्मचारी थिए । आइटी सम्बन्धी कामका सिलसिलामा उनी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको घर-घरमा पुग्नुपर्दथ्यो । न्यायाधीशहरुको घरघरमा पुगेर इन्टरनेट जडान, मर्मत, कम्प्युटर मर्मत संभारको सिलसिलामा दीपकको न्यायाधीशहरुकोमा पहुँच विस्तार भयो ।
उनी त्यही क्रममा सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाहरुको बीचौलिया बनिसकेका थिए । कल्याण श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भएपछि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै उनलाई सर्वोच्चको सेवाबाट हटाइएको थियो । त्यसपछि तिमल्सिना रसियन खर्बपति व्यापारी भएपनि कर, भ्याट छल्ने धन्दा गर्दै आएका उपेन्द्र महतोको सम्पर्कमा पुगेका थिए ।
यसबीचमा भारतीय नाकाबन्दीका समयमा २०७२ पुसमा इन्धन अभावको समयमा तिमल्सिनाले पूर्वराजाका ज्वाई राजबहादुर सिंहसँग मिलेर मालिका पेट्रोलियम प्रालि खोलेका थिए । जसको अध्यक्ष उनै भएका थिए । पेट्रोलियम पदार्थको दीर्घकालीन आयात, भण्डारण र कारोबारका लागि आयल निगमले मालिकालाई स्थायी अनुमति दिएको थियो ।
त्यसैक्रममा तिमल्सिनाको आयल निगमका एमडी गोपालबहादुर खड्कासँग विशेष सम्बन्ध कायम भएको थियो । बानेश्वर बत्तीसपुतलीमा सामान्य डेराको जीवनयापन गर्ने दीपक तिमल्सिना आज कलंकीमा घर र गाडीदेखि विभिन्न कम्पनीका संचालक, सेयरहोल्डर र बीसौं करोडका मालिक बन्न सफल भएका छन् । उनी टेल्को इन्भेष्टमेन्ट प्रालिका कार्यकारी निर्देशक, इन्टरनेशनल स्कुल अफ लका निर्देशक तथा सस्थापक, मालिक पेट्रोलियम र मेट्रो नेपाल(काठमाडौं मेट्रो रेल कम्पनी) का कार्यकारी निर्देशक भन्ने गर्दछन् ।
केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको तनाव बढ्ने संकेत,लालबाबु राउतलाई अमेरिका जान रोक
काठमाडौं । मधेशका विषयमा वकालत गरिरहेको एउटा एनजिओको कार्यक्रममा भाग लिन अमेरिका जान लागेका प्रदेश नम्बर […]
कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव टुङ्गिन डेढ महिना लाग्ने
काठमाडौँ, ७ कात्तिक । संसद्मा प्रवेश पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह […]
पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य फेरी घट्यो
असार १८, काठमाण्डौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य घटाएको छ । भारतीय आयल निगमले पठाएको नयाँ […]
काठमाडौंबाहिरबाट पनि श्रम स्वीकृति
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश जाने कामदारलाई श्रम स्वीकृतिमा पहुँच विस्तार गर्न सरकारले […]
एमाओबादी उपाध्यक्ष बोगटीलाई हृदयघात: गंगालाल हृदयरोग केन्द्रमा उपचार हुदै
काठमाडौं, भदौ २७– एनेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष पोष्टबहादुर बोगटीलाई हिजो साँझ हृदयघाट भएको छ । बिहीबार साँझ […]